Komishọna Mezue Azọpụtala Ndị Ara Abụọ Ọzọ n'Onitsha - Igbo News | News in Igbo Language
Mar 6, 2021 - 09:57
Igbo sị na omere onye nà-èmere chi ya.
N'ịgbaso nke a, Kọmishọna na-ahụ maka ọdịmma ọhaneze na ihe metụtara ụmụaka na ụmụnwaanyị n'ime steeti Anambra, bụ Oriakụ Ndidi Mezue azọpụtakwuola mmadụ abụọ ọzọ nwere nsogbu n'ụbụrụ, ma kpọpụta ha n'okporo ụzọ ebe ha nọ.
Ndị a bụ ndị a zọpụtara na mpaghara 'Onisi Onira Garden', dị na gburugburu 'Boromeo Roundabout' dị n'Onitsha, bụ ebe ha bi n'oge mbụ wee na-emetọ ebe ahụ n'ụdị dị iche iche.
E buruzịrị ha abụọ wee gaa n'isi ụlọọrụ ahụ dị n'Awka, ebe Kọmishọna ahụ nọzịrị wee gbaa ha ajụjụọnụ, nke otu onye n'ime ha nọrọ na ya wee kwuo na aha ya bụ Obinna, onye Mbanọ nke steeti Imo; ma onye nke ọzọ apụghị ịkọwatanwu ihe ọbụla nwere isi banyere onwe ya.
Ya bụ Kọmishọna kpụchazịkwara ha isi, dozie ha ka dị ọcha, tupu e buruzie ha wee gaa n'ogige ebe a na-elekọta ndị ara na ndị ọzọ nwere nsogbu ụbụrụ dị na Nteje, n'okpuruọchịchị ime obodo Oyi.
Kọmishọna Mezue kọwara na ọ bụ ebe ahụ ka a ga-anọzị wee lekọta ma gwọọ ha, kụziere ha ọrụ aka, ma nye ha nkwàdo tupu a hapụzie ha ka ha laa, je bàára onwe ha úrù n'obodo ha dị iche iche.